ဖောင်းကြွဆေးသုတ် | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan -wallpro.com.tw
သုံးဖက်မြင်ကဘာလဲ ဖောင်းကြွဆေးသုတ်? အတော်များများကမိတ်ဆွေတွေကိုဒီအကြောင်းသံသယရှိပါလိမ့်မယ်။ လူတိုင်းကတကယ်တော့၏ဤစတိုင်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ် ဖောင်းကြွဆေးသုတ် မြို့ရိုးကိုမျက်နှာပြင်။ ဒါဟာတချို့ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုသို့မဟုတ်အချို့သောအဆောက်အဦးများအတွက်ဖောင်းကြွစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သူကထွင်းထုကိုကြိုက်သည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်လည်းဒါဟာစောင့်ကြည့်အလွန်အနုပညာနှင့်ရှုထောင်သုံးခုဖြစ်သည့်သုံးဖက်မြင်ဒီဇိုင်းစတိုင်ဖြစ်ပါသည် ဖောင်းကြွဆေးသုတ်.
အပေါ်ယံပိုင်းတစ်မှုန်ရေမွှားသေနတ်နှင့်အတူမြို့ရိုးအအလွှာပေါ်သို့ဆေးသုတ်ကိုလေပေါ်မှာပ, ကယ်ဆယ်ရေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအောင်မြင်ရန်တစ်မှုန်ရေမွှားသေနတ်မှုန်ရေမွှားဆောက်လုပ်ရေးနည်းလမ်းကိုသုံးပြီး, ပြီးတော့ဆေးထိုးခြင်းကြောင့်တစ်ဦး damp ပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့အခါ, သူကသက်ဆိုင်ရာ tools များနှင့်အတူပြားဖြစ်ပါတယ်, ပြီးတော့တစ်ဦး ခွက်ဖောင်းကြွနှင့်အလှဆင်မြို့ရိုးကိုမျက်နှာပြင်တစ်ခုဖောင်းကြွစာလုံးသုံးရှုထောင်ခံစားချက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ခုံးအခမဲ့ပုံစံ, ဖွဲ့စည်းသည်။
ပုံစံ - 4-3
ဆောက်လုပ်ရေးစဉ်အတွင်း,ဒီ tool ပက်ဖြန်းပြီးနောက်ပြားမပါလျှင်,ဖွဲ့စည်းထားသောကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများ၏အသွင်သဏ္ဌာန်သဘာဝဖောင်းကြွစာလုံးပုံစံဖြစ်လိမ့်မည်.ဒါပေါ့,ဤအဖောင်းကြွပုံစံများဟာမှုန်ရေမွှားသေနတ်၏ nozzle ၏အရွယ်အစားပေါ်တွင် မူတည်. ကွဲပြားပါလိမ့်မယ်,နှင့်ဖွဲ့စည်းထားသောပုံစံ၏အရွယ်အစားကွဲပြားခြားနားပါလိမ့်မည်.ဖြည့်စွက်ကာ,ဒါကြောင့်တိကျတဲ့ပုံစံထုတ်လှိမ့်ဖို့အထူးပုံစံ roller သုံးစွဲဖို့လည်းဖြစ်နိုင်,သို့မဟုတ်တစ်လှိုင်းထွက်ဆွဲထုတ်ဖို့-တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားကြည့်နှင့်ခံစားအောင်မြင်ရန် shaped အခမဲ့ပုံစံ.
သုံးဆောက်လုပ်သည့်အခါ-ရှုထောင်ဖောင်းကြွအနုပညာ-ခြယ်သမြို့ရိုးကို,ဆောက်လုပ်ရေးနည်းလမ်းများ၏အရည်အသွေးနှင့်ဆေးသုတ်၏အရည်အသွေးအထူးအာရုံစိုက်,ဆောက်လုပ်ရေးနည်းလမ်း၏ Fine,မြို့ရိုးအမျက်နှာပြင်၏စိုထိုင်းဆနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိ, မရှိ,ပတ်ဝန်းကျင်၏စိုထိုင်းဆ,စသည်တို့ကို.တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ,ဆေး၏အရည်အသွေးအလွန်ဆောက်လုပ်ရေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်နောက်ဆက်တွဲပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကွဲပြားခြားနားမှုကိုထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်.
A ကောင်းဆုံးအနုပညာဆေးသုတ်ဆောက်လုပ်ရေးအရည်အသွေးမြင့်ရေစိုခံတာနဲ့ဆန့်ကျင်ခြင်းဖြင့်အောင်မြင်နိုင်ပါသည်-အနာနှင့် antibacterial.A ကောင်းဆုံးဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းနောက်ဆက်တွဲအိမ်မှာသန့်ရှင်းရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအပေါ်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်.ChengLin ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတူတကွထိုအလုပျနိုငျ.သို့,ChengLin ၏ဆန်းသစ်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်အနုပညာဆေးသုတ်နည်းပညာဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့ကမှတဆင့်,ဆောက်လုပ်ရေးရှေးရိုးစွဲနည်းစနစ်နှင့်အင်ဂျင်နီယာနည်းစနစ်များအမျိုးမျိုးသုံးပြီး,ဂျပန်များ၏လျှောက်လွှာနှင့်အတူ coupled'နိပွန်မူပိုင်စနစ်ကအင်္ကျီကိုယ့်,တိုင်း link ကို ChengLin ဆန်းသစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လက်သမား၏ဝိညာဉ်ကြောင်းသေချာစေရန်,အိမ်မှာပါစေဒါဟာရုံအဆင်ပြေအိမ်မှာမဟုတ်ပါဘူး,ဒါပေမယ့်လည်းကျန်းမာနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေအိမ်ပြန်.ဒါဟာခိုင်မာတဲ့နှင့်ထူးခြားသောဒီဇိုင်းရှိပါတယ်.